हत्याको विरोधमा झडप हुँदा तीन प्रहरी घाइते
भाद्र १९ २०७४ रासस
सुशीला रेग्मी पाल्पा, भदौ १९ । रामपुरमा प्रहरी र स्थानीयवीच झडप हुँदा तीन जना प्रहरी घाइते भएका छन् । रामपुर नगरपालिका–१ चनौली बस्ने २८ वर्षीय ओमबहादुर खाँणको हत्याको विरोधमा उत्रिएका आक्रोशित स्थानीयको भिडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले दुई राउण्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो । स्थानीयको भिडको ढुङ्गा हानाहान र प्रहरीको लाठी चार्जबाट तीन...
पेन्सन क्याम्पको फुलबारीद्धारा विरोध
भाद्र १८ २०७४ .
बुटवल, भदौ १८ । मणिमुकुन्द सेन उद्यान संरक्षण समिति (फुलबारी) ले भारतीय पूर्वसैनिक स्थाथी पेन्सन क्याम्पको विरोध गरेको छ । फुलबारीले चर्चेको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको जग्गा समेत अतिक्रमण गर्नेगरी पेन्सन क्याम्प निर्माण गर्न थालिएको भन्दै समितिले त्यसको विरोध गरेको हो । समितिको आईतबार बसेको बैठकले सो क्याम्पलाई अन्यत्र सार्न सम्बन्धित ...
नारायणगढ- मुग्लिन सडक अझै बन्द
चितवन ,भदौ १८: पहिरो हटाएपछि मुग्लिन मलेखु सडकखण्डमा यातायात सञ्चालनमा आएको छ। विहान साढे ८ बजे पहिरो पन्छाएपछि यातायात सञ्चालनमा आएको हो। राती १२ बजे पहिरो खसेर यहाँको सयक बन्द भएको थियो। मुग्लिन मलेखु सडक अन्तरगत फिस्लिङ र घोप्टेभिरमा पहिरो खसेर राती १२ बजेबाट सडक बन्द भएको थियो। चितवनका प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापाका अनुसार नारायणगढ मुग्लिक सडकक...
रामपुर नगरपालिकामा एक युवकको हत्या
पाल्पा, भदौ १८- रामपुर नगरपालिका–४ देवीस्थानमा शनिबार साँझ एक युवकको हत्या भएको छ । हत्या हुनेमा रामपुर चिहानडाँडाका २८ वर्षीय ओमबहादुर खाँण रहेका छन् । खाना खाएर गल्लीमा बसिरहेको अवस्थामा एक्कासि उनको धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या भएको हो । हत्यापछि स्थानीय बासिन्दाले प्रहरीलाई खबर गरी अस्पताल पुर्याए पनि उनको बाटैमा मृत्यु भएको थियो । कृष...
काठमाडौँ,भदौ १८ - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले इस्लाम धर्मावलम्बीको महान पर्व बकर–ईद (इदुल जोहा) का अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण इस्लाम धर्मावलम्बी नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीमा सुख, शान्ति, समृद्धि तथा सुस्वास्थ्यका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । आज एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले विविध धार्मिक तथा सांस्...
सिरहामा चुल्ठो काटिएकी महिलाको मृत्यु
सिरहा, भदौं १७ । सिरहा जिल्लामा चुल्ठो काटिएर घाइते बनेकी एक महिलाको शुक्रबार साँझ मृत्यु भएको छ । सुखिपुर नगरपालिका– ७ की अन्दाजी २५ वर्षीया लक्ष्मीनिया मुखियाको मृत्यु भएको हो । पीडित परिवारका अनुसार शुक्रबार दिउँसो ४ बजेतिर घरमा कोही नभएको बेला ती महिलाको चुल्ठो काटिएको थियो । चुल्ठो काटिएपछि बेहोस भएकी मुखियालाई लहानस्थित ओम गुरुकुल पोलि...
मलेसिया पुगेको ५ दिनमै मानसिक सन्तुलन गुमेपछि...
भाद्र १७ २०७४ रासस
जुम्ला, भदौ १७ । यसअघि पैसा कमाउन उनी भारतमै जान्थे। गरिब परिवारको जीवनलाई त्यहाँको कमाइले कहिल्यै पुगेन। कठिन संघर्षका साथ १२ कक्षामा पढ्दै गरेका मानसिङ सुनारको थोरै पैसा भए पनि स्वदेशमै रोजगारी गर्ने इच्छा थियो तर त्यस्तो नोकरी कतै मिलेन। बेरोजगार बसेर घर नचल्ने भएकाले उनलाई पुनः विदेशिनुको विकल्प थिएन। सधैँ भारत जाँदा प्रगति नभएकाले खाडी मुलु...
१० मंसिरमा ३२ र २१ मंसिरमा ४५ जिल्लामा निर्वाचन
काठमाडौँ, भदौ १६ । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पहिलो चरणमा ३२ र दोस्रो चरणमा ४५ जिल्लामा गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । भौगोलिक अनुकूलता समेतलाई विचार गरी पहिलो चरणमा आगामी मंसिर १० गते आइतबार हिमाली र उच्च पहाडी ३२ जिल्लामा तथा दोस्रो चरणमा मंसिर २१ गते बिहीबार पहाडी तथा तराईका ४५ जिल्लामा निर्वाचन सञ्चालन गर्...
ट्रक सहित ढाईसय बोरा तस्करीका यूरियामल बरामद
भाद्र १५ २०७४ .
लुम्बिनी, भदौ १५। रुपन्देहीका किसानहरु धानबालीमा युरियामल छर्न नपाएको बेला एक सहकारी संस्थाको मिलोमातोमा तस्करीका लागि कपिलबस्तु लैजान लागेको अवस्थामा युरिया नामक रासायनिक मलखाद बरामद भएको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय सुर्यपुराले दिएको जानकारी अनुसार गए राति दश बजे गैडहवा गाँउपालिका वडा नं. १ स्थित सत्यकर्म सहकारी संस्थाका अध्यक्ष शिवपूजन यादवले र...
गुल्मी, भदौ १५ । वर्षासंगै आएको बाढीले गुल्मीमा सयौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ । गत दुई साताको अवधिमा कालीगण्डकी, बडिगाढ, हुग्दी, रिडी, छल्दी, पनाहा लगायतका खोलामा आएको बाढीले उक्त क्षती पुराएको हो । बडिगाढ खोलामा आएको बाढीले सबै भन्दा धेरै धान सहितको खेतमा बढी क्षति पु¥याएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार मुसिकोट नगरपाल...
बुटवलको मिलनचोकमा भएको सवारी दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु
बुटवल ,भदौ १५। बुटवलको मिलनचोकमा बिहीबार भएको सवारी दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ । उत्तरबाट दक्षिणतर्फ जादै गरेको बा ६४प ६३८४ नम्बरको मोटरसाइकललाई Mh 04 eb ५३७६ नम्बरको भारतीय ट्रकले ठक्कर दिदा मोटरसाइकलमा सवार व्यक्तिको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको हो । मृतक पाल्पा तानसेन–७ का रुक बहादुर थापा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । मोटरसाइकललाई ठक्कर दि...
उद्योगधन्दामा विद्युत् महसुल बढ्दैन:उर्जामन्त्री
काठमाडौँ,भदौ १५ । सरकारले तत्काल उद्योगधन्दामा विद्युत्को महसुल नबढाउने भएको छ । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले उद्योगधन्दामा तत्काल विद्युत्को महसुल नबढाउने र उद्योगी व्यवसायीलाई कुनै अप्ठ्यारो नपारिने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घका पदाधिकारीसँग ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा ऊर्जामन्त्री शाहीले भने, ‘विद्युत् महसुल वृद्धि गर्ने निर्...
नारायणगढ-मुग्लिनसडक अवरुद्ध ,५ स्थानमा पहिरो
चितवन भदौ,१५ । नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डका पाँच ठाउँमा पहिरो खसेपछि आज बिहानदेखि सडक अवरुद्ध भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापाका अनुसार जलबिरेमा दुई स्थानमा, कालीखोला, चारकिलो र पाँचकिलोमा एक–एक स्थानमा पहिरो खसेको छ । चारकिलोमा ठूलो पहिरो रहेता पनि अन्यत्र साना पहिरो रहेको उनले बताए । बिहानैदेखि पहिर...
नारायणगढ–मुग्लिन सडक बग्यो, हजारौं सवारी अलपत्र
चितवन,भाद्र १५ निरन्तर परेको झरीले नारायणगढ–मुग्लिन सडक अन्तर्गत इच्छाकामना गाउँपालिका– ६ चोरखोला नजिकै चारकिलोमा सडक बगाएको छ । त्रिसुली किनारतर्फको आधा सडक बगाएपछि हजारौं सवारी रोकिएका छन् । ९ मिटर चौडा सडकमध्ये ४ मिटर बगेको छ । करिव ५० मिटर लम्बाईमा सडक बगेको नारायणगढ मुग्लिन सडक आयोजनाका इन्जिनियर शिव खनालले जानकारी दिए । आधा सडक बगे...
भाद्र १४ २०७४ रासस
चितवन, भदौ १४-भरतपुर महानगरपालिका–१५ मंगलपुरमा आज बिहान छोराको कुटाइबाट आमाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार अन्दाजी ४५ वर्र्षीया सविता दरैलाई आफ्नै छोरा २० वर्र्र्षीय आशिष दरैले विहान करिव १० बजे बाँधेर कुटपिट गर्दा गम्भीर घाइते भई उपचारका लागि अस्पतालतर्फ ल्याउँदै गर्दा मृत्यु भएको हो । मादकपदार्थ सेवन गरेकी आमालाई सुधार...
चितवन ,भदौ १४- जिल्लामा वर्षेनी दूध उत्पादन बढ्दै गएको छ । जिल्ला पशुसेवा कार्यालयकाअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको अन्तरालमा जिल्लामा कूल १० हजार ६९६ मेट्रिक टन दूध उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । गत आवमा मात्र चार हजार ४१४ मेट्रिक टन दूध उत्पादनमा वृद्धि भएको कार्यालय प्रमुख डा डिल्लीराम सेढाईंले जानकारी दिनुभयो । दूध उत्पादनका हिसाबले चितवन अब्बल ...
भाद्र १४ २०७४ ekhabarnepal
काठमाडौं,भदौ १४ । सरकारले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गर्दै मंसिर २१ गतेका लागि अर्को मिति तय गरेको छ । सरकारले यसअघि दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्ने निर्णय गर्दै मंसिर १० गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकेको थियो । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त सुझावका आधारमा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने गर...
कुलेश्वरको कारबाटिकाको गोदाममा भिषण आगलागी
काठमाडौं, भदौ १३– काठमाडौंको कुलेश्वरस्थित कारबाटिकाको गोदाममा भीषण आगलागी भएको छ । कुलेश्वरस्थित ग्लोबल बैंकको अलाडि रहेको रामकृष्ण बैदारको कारबाटिकाको गोदाममा साढे चार बजेतिर आगलागी भएको हो । महानगरपालिकाको तीन वटा दमकल र १० वटा पानी ट्याङकर आगो निभाउन परिचालन भएको प्रहरी कार्यालय कालीमाटीले जनाएको छ । आगो अझै पनि नियन्त्रणमा नआएको प्रहर...
जनकपुरलाई महानगरपालिका घोषणा गर्ने सरकारको तयारी
वीरगन्ज भदौ,१३। प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यालयहरु समेत स्थापना भइसकेको अवस्थामा सरकारले जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको एक सातामात्र अगाडि जनकपुरलाई महानगर घोषणा गर्न लागिएको सत्तारुढ फोरम लोकतान्त्रिकका महामन्त्री भारतेन्दूकुमार मल्लिकले खुलासा गरेका ...
सेनाले सुनौलो इतिहास रच्ने...
भाद्र १३ २०७४ रासस
काठमाडौँ, भदौ १३ । - नेपाली सेनाले देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा हेरिएको काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग ९फाष्ट ट्रयाक० को जिम्मेवारीलाई पूर्वाधार निर्माणमा सुनौलो इतिहास रच्ने अवसर र ठूलो चुनौतीका रुपमा लिएको छ । काठमाडाँै उपत्यकालाई तराई मधेससँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो ७६ दशमलव २ किमीको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना ९फाष्ट ट्रयाक० निर्माणला...
सांस्कृतिक केन्द्र बनाउन प्रवासी नेपाली मन्च अमेरिकाको सहयोग
भाद्र १२ २०७४ .
भदौ १२, न्यूयोर्क । रिजवुड नेपाली समाजले आयोजना गरेको महायज्ञमा प्रवासी नेपाली मन्च अमेरिकाले एक लाख ११ हजार १११ डलर तथा ११ सेन्ट हस्तान्तरण गरेकोछ । करिब एक करोड ११ लाख १११ रूपैयाँ बराबरको चेक (धनादेस ) रिजउड नेपाली समाजलाई महापुराणमा रकम हस्तान्तरण गरेको हो । विश्व भर स्थापित अन्य संघ-संस्थाले प्रवासी नेपाली मन्च अमेरिकाले गरेको उत्प्रेर...
नवलपरासीमा बाढीले कृषिमा ७८ करोडको क्षति
परासी,भदौ १२ - नवलपरासीमा बाढीले कृषि क्षेत्रमा करिब ७८ करोड रुपैयाँकोे क्षति पु¥याएको छ । बाढीले खतबारीमा लगाएको अन्नबाली नष्ट भएको छ । धानबाली, तरकारी र माछा पालनमा समेत बाढीले क्षति पु-याएको छ । दुई साता अगाडी बर्षा र स्थानिय खोलाको बाँध फुटेर गाउँगाउँमा पसेको बाढीको निकास हुन नपाएपछि खेतमै पानी जमेर अन्नबाली नष्ट भएको हो । सिमावर्ति प्...
निर्बाचन क्षेत्रको नाममा उपमहानगरबाट अगल्याउने प्रयास गरेको मोतिपुरबासीको आपत्ती
बुटवल,भदौ १० । निर्बाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले गरेको निर्बाचन क्षेत्रको पूर्नगठनले आफूहरुलाइ बुटवल उपमहानगरबाट अगल्याउने प्रयास गरेको भन्दै मोतिपुरबासीले आपत्ती जनाएका छन् । साबिक मोतिपुर हाल बुटवल १७ ,१८ र १९ का स्थानीयले आफूहरुको भूगोल ,सामाजिक तथा सांस्कृतीक सम्बन्ध कायम रहेकाले बुटवल उपमहानगरसंगै एउटै निर्बाचन क्षेत्रमा राख्न अनुरोध गरेक...
दूध बेचेर घर फर्कदा आक्रमणमा परेका वडा अध्यक्ष कोइरालाको मृत्यु
भाद्र १० २०७४ रासस
काभ्रे, भदौ १० । धुलिखेल नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष राजन कोइरालाको गएराति मृत्यु भएको छ। गाउँमा दूध बिक्री गरेर घर फर्कंदै गरेको अवस्थामा कोइरालामाथि भदौ ४ गते घर नजिकै आक्रमण भएको थियो। आक्रमणबाट गम्भीर घाइते हुनुभएका कोइरालाको ६ दिनदेखि अचेत अवस्थामा नै नर्भिक अस्पताल, काठमाडौँमा उपचार भइरहेको अवस्थामा निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धुलि...
नवलपरासीको सुस्तामा स्थानीयले फुटाए भारतीय नहर
भाद्र ९ २०७४ .
कावासोती भदौ ९। सुस्ता गाउँपालिकाको १ र २ मा डुवान भएको भन्दै स्थानीय वासिन्दाले फेरि भारतीय पश्चिमी नहर भत्काएका छन्। गत भदौ १ गते पश्चिमी नहरलाई फुटाल्ने प्रयास असफल भएपछि उनीहरुले शुक्रबार पुन फुटालेका हुन्। दुई सय भन्दा बढी स्थानीय वासिन्दा सहभागी भएर नहर फुटालिएको स्थानीय रवीन्द्र यादवले बताए। दिउँसोदेखि स्थानीय वासिन्दाले भारतीय पश्चिमी नह...
भैरहवा विमानस्थलको ठेक्का तोड्ने मुडमा: प्राधिकरण
काठमाडौं भदौ,९ । भैरहवा विमानस्थलको काम सन्तोषजनक रुपमा काम अघि नबढेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण चिनियाँ ठेकेदार नर्थ वेष्ट सिभिल एभिएसनसँग ठेक्का तोड्ने मुडमा पुगेको छ । प्राधिकरणले हालै अन्तिम मौकास्वरुप डेढ महिनाको समय दिँदै कम्पनीलाई ‘नोटिस टु करेक्ट’ पठाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता विरेन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार पत्र पठाएपछि पनि काममा कु...
दैलेखमा वर्षापछि घर भत्किँदा १ मृत्यु, २ घाइते
कालिकोट, भदौ ९ । अविरल वर्षातका कारण शुक्रबार बिहान २ बजेतिर दैलेख सदरमुकाममा घर भत्किदा एक जनाको मृत्यु भएको छ। नारायण नगरपालिका ११ मा आफ्नै घर भत्किदा ४५ वर्षीया दीपा चन्द्रको मुत्य भएको हो। घटनामा उनकी बहिनी ३५ वर्षीया विन्दु शाही र उनकी १२ वर्षीया छोरी मुना शाही घाइते भएका छन्। विन्दु र उनकी छोरी तीज मनाउन दीपाको घरमा आएका थिए। दीपाको घटनास्...
अस्ट्रेलियामा ‘लुम्बिनी: सम्भावना र चुनौतिहरु’ विषयक अन्तरक्रिया
अस्ट्रेलिया, २४ अगस्ट । साउथ अस्ट्रेलियाको राजधानी एडिलेडको क्युरिए स्टि्रटमा ‘लुम्बिनीः संभावना र चुनौतिहरु’ बिषयक अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा लुम्बिनी-कपिलवस्तु दिवस अभियानका विश्व संयोजक इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले लुम्बिनीका सम्बन्धमा बहुआयामिक प्रस्तुति गरेका थिए । श्रेष्ठले लुम्बिनीको विकासका लागि राष्ट...
अन्र्तराष्ट्रिय पर्यटकीय स्थल लुम्बिनी अन्धकारमय
भाद्र ७ २०७४ .
भैरहवा ,भदौ ७ । नेपाल बिद्युत प्राधीकरण लुम्बिनी प्रशाखाको शनिवार मुख्य प्रशारण लाईन ट्रान्सफार्म जल्दा अन्र्तराष्ट्रिय पर्यटकीय स्थल लुम्बिनी अन्धकारमय भएको छ । साउन महिनामा मायादेबी मन्दिरको ट्रन्सफार्म जल्दा एक साता बिद्युत आपुर्ति ठप्प भएको घटना सेलाउन नपाउदै यो घटना भएको हो । ओभरलोडका कारण पहिलो पटक बिद्युत प्राधीकरण लुम्बिनीको पाँच एम.ब...
अर्घाखाँचीमा १२ हजार नयाँ मतदाता थपिए
अर्घाखाँची ,भदौ ७ । अर्घाखाँचीमा करिब १२ हजार नयाँ मतदाता थपिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन पछि जिल्ला निवार्चन कार्यालय अर्घाखाँचीले संकलन गरेको मतदाता मात्रै ११ हजार ९६७ जना रहेको जिल्ला निवार्चन कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर नारायणप्रसाद बन्जाडेले जानकारी दिनुभयो । साउन १६ गतेदेखि भदौ ३ गतेसम्म गरिएको नामावली संकलनमा सबैभन्दा धेरै सितगंगाबाट २ ...
अखिल क्रान्तिकारीको २१औं सम्मेलनको तयारी पूरा
भाद्र ६ २०७४ .
काठमाडौं भदौ,६ । नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र बिद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)को भोलिदेखि सुरु हुने २१औं राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी पूरा भएको छ । अखिल क्रान्तिकारीले बिज्ञप्ति जारी गरी बुधबार प्रदर्शनी केन्द्रमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने जानकारी दिएको छ । क्रान्तिकारीले यसलाई एकताको सम्मेलन भ...
भाद्र ६ २०७४ रासस
वालिङ (स्याङ्जा), भदौ ६ - निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलनमा स्याङ्जामा १८ हजार ६७६ जनाले नाम लेखाएका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, स्याङ्जाका अनुसार नाम दर्ता गराउनेमा नौ हजार ५८८ पुरुष र नौ हजार ८८ महिला गरी कूल १८ हजार ६७६ जना छन् । प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आह्वान गरेको फोटोसहितक...
बिद्युत प्राधिकरणले थाल्यो अनलाइन भुक्तानी प्रणाली
भाद्र ५ २०७४ .
काठमाडौं भदौ,५ । अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ग्राहकलाई महसुल तिर्न प्राधिकरणको शाखा कार्यालयमा गएर लाइन बस्नैपर्ने बाध्यता हटेको छ । घर बसीबसी अनलाइनबाटै बिद्युत महसुल तिर्न सकिने छ । इन्टरनेटमार्फत विद्युत महसुल बुझाउन सकिने सेवा प्राधिकरणले सोमबारदेखि सुरु गरेको हो । लगनखेलस्थित प्राधिकरण कार्यालयका ग्राहकले सोमबारदेखि अनलाइनबाटै भुक्तानी...
घुससहित राजश्व अत्तरियाका दुई कर्मचारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
कैलाली, भदौ ५। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरको टोलीले सेवाग्राहीबाट घुस (पैसा) लिदै गरेको अवस्थामा कैलालीको अत्तरियाबाट २ जना पक्राउ गरेको छ । राजश्व अनुसन्धान कार्यालय अत्तरियामा कार्यरत नायब सुब्बा राजेन्द्र साउँद र कार्यालय सहयोगी टिकाराम जोशीलाई सेवाग्राहीबाट घुस वाफत ४५ हजार रुपैयाँ लिँदै गरेको अवस्थामा रंगेहात पक्...
भाद्र ५ २०७४ रासस
काठमाडौं भदौ, ५ । प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने बाबुको मुख हेर्ने पर्व आज देशभर पितालाई विशेष सम्मान गरी मनाइँदैछ । यस वर्षको भाद्र कृष्ण औंसी सोमबार परेकाले बिहान उठेर नबोलीकन स्नान गरेमा एक हजार गाई दान गरेबराबरको फल पाइने धर्म ग्रन्थ हेमाद्रिमा वर्णन गरिएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय वाल्मीकि विद्यापीठ धर्मशास्त्र विभागका वि...
भैरहवा भन्सार घोटाला प्रकरण
भैरहवा भदौ, ४ । भैरहवा भन्सारमा भएको अनियमितामा मुछिएका एजेण्ट जेल चलान भएका छन् । किर्ते प्रज्ञापन पत्र बनाएर अवैध रुपमा मालवाहक ट्रकको भन्सार पास गराएको अभियोगमा भैरहवा भन्सार कार्यालय एजेण्ट जगतराज दाहाललाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको हो । भन्सार ऐन दफा ५७ को उपदफा १ अन्र्तगत चोरी पैठारी गर्ने प्रयत्न गरेको अभियोगमा दाहाललाई १ वर्ष कैद ...
रुपन्देही र कपिलवस्तुमा चुल्ठो काटिने रहस्यमय घटना :युवती आतंकित
भैरहवा भदौ ४ । रुपन्देही र कपिलवस्तुमा पनि युवतीहरुको चुल्ठो काटिएका घटना सार्वजनिक भएका छन् । भारतमा यस्ता घटनाका कारण युवती आतंकित छन् । रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी १५ वर्षीया सबाना (परिवर्तित नाम) को चुल्ठो आइतबार बिहान काटिएको छ । सोही नगरपालिकाकी अर्की २७ वर्षीया युवतीको पनि चुल्ठो काटिएको छ । यस्तै, कपिलवस्तुको मायादेवी ...
तम्घास-सिमलटारी सडक मर्मत तीव्र, ३ दिनसम्‍म वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न आग्रह
गुल्मी, भदौ ४ | गुल्मीको तम्घास–सिमलटारी सडक खण्ड तीन दिनलाई बन्द भएको छ। सडक चौडा पार्ने काम गरिरहेकाले सडक बन्द गरिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। निर्माण कार्य भइरहेको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित छल्दी पहान पुलनजिकै ठूलो चट्टानलाई चौडा पार्ने काम गर्ने भन्दै बाटो बन्द गरिएको निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर नवीन सापकोटाले जानकारी दिए। आइत...
नेपाल आउने मालबाहक कन्टेनर र ट्रक भारतमा रोकिए, विलम्ब शुल्क तिर्दा हैरान
भाद्र २ २०७४ रासस
पथरी,भदौ २ । नेपालको सीमावर्ती भारतको जोगबनी क्षेत्रका बाढीपीडितले राहत र पुनःस्थापनाको माग गर्दै हडताल गरेका कारण नेपाल आउने मालबाहक कन्टेनर र ट्रक रोकिएका छन् । भारतीय बजार जोगबनीका स्थानीयले हडताल गरेका कारण नेपालतर्फ आउने मालबाहक सवारीसाधन रोकिएका हुन् । हडतालका कारण जोगबनी बजार पूर्णतः बन्द छ । सडकमा प्रदर्शनकारीले टायर बालेर नाराबाज...
प्रतिवेदन एक दुई दिनमै सार्वजनिक : भन्सार चोरी निकासी प्रकरण
भाद्र १ २०७४ .
भैरहवा, १ भदौ । भन्सार कार्यालय भैरहवाबाट अवैध रुपमा एउटै प्रज्ञापनपत्रबाट एक भन्दा बढी मालवाह ट्रक निकासीबारे बुझ्न गठित छानविन टोलीले आफ्नो काम सकिन लागेको र अबको १–२ दिनमै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको बताएको छ । छानविन समितिले भैरहवामा आयोजना गरेको भैरहवाका भन्सार एजेण्ट र सञ्चारकर्मिका सुझाव संकलन कार्यक्रममा छानविन टोलीका संयोजक भन्सार ...
रुपन्देही ,भद्रौ १ । रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका–३ टटेरा र देवदह–८, मुखिया टोल जोड्ने पुल भासिदा आवात जावतमा समस्या भएको छ । विगत केही दिन देखि लगातार परेको बर्षाका करण उक्त पुल भासिदा स्थानीयवासी आवात जावतमा समस्या भएको हो । देवदह–३, को टटेरा निवासी स्थानीयवासी उक्त पुल हुदै खैरेनी तर्फ आउने गरेपनि बर्षाका कारण पुल भासिए पछि घुमेर आउनु परेको स्...
सुस्ताको बाँध भत्काउन हिँडेकालाई प्रशासनले रोक्यो
काठमाडौं, भदौ १ । नवलपरासीको सुस्तामा रहेको भारततर्फ पानी लगेको बाँध भत्काउन हिँडेका स्थानीयलाई प्रशासनले रोकेको छ । आक्रोशमा आएर कुनैपनि काम गर्न नहुने भन्दै स्थानीयलाई आफूहरुले रोकेर राखेको नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाले जानकारी दिए । ‘भत्काउनु पर्ने भन्दै बाँध तर्फ अघि बढेका स्थानीयलाई हामीले रोकेर राखेका छौं ।’ उनले हा...
पुरातात्विक ‘कपिलवस्तु संग्रहालय’ ओझेलमा
कपिलवस्तु भदौ १,– नेपालकै एक मात्र पुरातात्विक संग्रहालय “कपिलबस्तु संग्रहालय”को उचित ब्यवस्थापन, प्रचार—प्रसार र संरक्षणमा सरोकारवालाको ध्यान नपुग्दा ओझेलमा परेको छ । संग्रहालय स्थापना भएको ५ दशक हुँदा समेत सम्बन्धित निकायले संग्रहालयको ब्यबस्थापनका साथै र प्रचार—प्रसार गर्न नसक्दा ओझलमा परेको हो । ७ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको संग्रहालयमा...
दाउन्नेको अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा
नवलपरासी भदौ,१ । जिल्लाको दाउन्ने सडकखण्ड भत्किएपछि अवरुद्ध बनेको सडक बिहीबार बिहानदेखि एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ । अवरुद्ध सडक २४ घन्टाका लागि बन्द गरेर मर्मत गरिएपछि यातायात सञ्चालनमा आएको हो । बिहान २ बजेबाट यातायात सञ्चालनमा आएको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दघाटका प्रहरी निरीक्षक टेकबहादुर राउतले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरा...
सवारी चालक र सडकका कारण दुर्घटना बढ्दो
साउन ३२ २०७४ .
भैरहवा । सवारी दुर्घटना रोक्न जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले विभिन्न सचेतना अभियान चलाए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । चालकको लापरवाही र सडकका कारण दिनहुँ धनजनको क्षति हुनेक्रम बढ्दै गएको हो । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लमा दुई सय ४८ वटा साना ठूला सवारी दुर्घटना भएका छन् । जसबाट एक सय २५ जनाले ज्यान गुमाए । दुर्घटनाबाट एक सय ८५ जना गम्भीर घाइते भएका थिए...
भारतीय दूतावासले अलपत्रै पारेर छाड्यो पाल्पाको कोल्डस्टोर
पाल्पा । तानसेन नगरपालिकाको प्राविधिक रेखदेखमा र भारतीय राजदुतावासको आर्थिक सहयोगमा नगरको बाघखोरमा निर्माणाधीन कोल्डस्टोरेज अलपत्र रहेको छ । निर्माण कम्पनीले निर्माण काममा अत्यन्त ढिलाइ गर्दा भारतीय राजदुतावासबाट रकम तथा भुत्तानी नभएका कारण अलपत्र परेको हो । कृषि उपज भण्डारण गर्ने उद्देश्यले २ सय मेट्रिक टन क्षमता भण्डारण गर्न सक्ने ४ करोड ९९...
पूर्वाञ्चलमा ४७ जनाको मृत्यु, १५ जना बेपत्ता
साउन ३२ २०७४ रासस
विराटनगर, साउन ३२ । पूर्वाञ्चलमा अविरल वर्षा र पहिरोका कारण ४६ जनाको मृत्यु भएको छ र १५ जना बेपत्ता भएका छन् । आज बिहानसम्ममा मोरङमा सबैभन्दा बढी १७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सुनसरीमा १२ जना, झापामा १२ जना, सप्तरीमा एकजना, उदयपुरमा दुईजना गरी ४३ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै पहिरोले गर्दा पाँचथरमा दुई र इलाममा एक गरी तीनजनाको पनि मृत्यु भएको पू...
चितवनमा भोलिदेखि हर्न निषेध
चितवन साउन ३२–नारायणगढ र भरतपुर क्षेत्रमा भोलि बिहीबारदेखि सवारी साधनले हर्न बजाउन नपाउने भएका छन् । काठमाडौँ र पोखरापछि चितवनको भरतपुर केन्द्रीय बस टर्मिनल, चौबिसकोठी, नारायणगढ बजार हाइवे, आँपटारी र बाइपास सडकखण्डमा संकटकालीन अवस्थामा बाहेक हर्न बजाउन निषेध गरिएको छ । ती स्थानका भित्रि सडकमा पनि हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । जिल्ला ट...
दाउन्ने सडकखण्ड भत्किएपछि २४ घण्टाका लागि बन्द
नवलपरासी, साउन ३२ । जिल्लाको दाउन्ने सडकखण्ड भत्किएपछि २४ घण्टाका लागि बन्द गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीले सडक मर्मतका लागि भन्दै मंगलबार राति १० बजेदेखि बुधबार राति १० बजेसम्मका लागि सडक बन्द गराएको हो । जिल्ला प्रशासनले सूचना जारी गरेर सडक बन्द गराएपछि सवारीसाधन तथा यात्रु मारमा परेका छन् । यसअघि साना सवारी साधन पास भ...